တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မည်
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ကြား ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပေကျင်းမြို့မှ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သလို သဘာပတိအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ကြေညာချက်၌ ပြောကြားထားသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 19 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping will attend and chair in Beijing the summit commemorating the 30th anniversary of the dialogue relations between China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on Nov. 22.
The summit will be held via video link, foreign ministry spokesperson Hua Chunying made the announcement on Friday. Enditem
Photo : Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission (CMC), addressesasymposium commemorating the 75th anniversary of the victory of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War in Beijing, capital of China, Sept. 3, 2020. The symposium was held by the CPC Central Committee, the State Council and the CMC at the Great Hall of the People. (Xinhua/Xie Huanchi)
တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်ရှီးပြည်နယ်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးမှာ ဇန်နဝါရီမှ အောက်တိုဘာလအထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်လျက်ရှိ